कागजी ढलान - News Today
सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकामा सडक निर्माण लगायत विकासीय कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा कामै नगरी रकम निकासा भएको तथ्य बाहिरिए संगै विवादमा परेको उक्त गाउँपालिकाका अन्य योजनामा समेत अनियमितताको रहस्योद्घाटन भएको हो । न्यूज टुडेले गरेको स्थलगत अबलोकनका क्रममा गत आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ५ को रामनगरमा सडक ढलान कार्यमा १७ लाख ५० हजार खर्च भएको उल्लेख छ । तर,स्थलगत रुपमा हेर्दा चाहिँ सडक ढलानको कार्य कतै भएको देखिँदैन । यस्ता अनियमितताका घटना केही उदाहरण मात्रै रहेको भन्दै स्थानीयले गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । बलानबिहुल जिल्लाकै अति दुर्गम तथा पिछडिएको गाउँपालिका हो ।
सडक, विजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा,सुरक्षा लगायतका दृष्टिले पछि परेको यस भेगमा विकास निर्माणको गतिलाई बढी गतिका साथ अघि बढाउनु पर्ने गाउँपालिकाको जिम्मेवारी भित्र परेको छ । मधेश आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका युवालाई जनताले गाउँपालिकामा निर्वाचित गरी पठाएका छन् । यस कारणले पनि यहाँ विकास निर्माणको काममा तिब्रता दिनु आवश्यक मात्र होईन जनताको अपेक्षा पनि यही नै रहेकोमा कुनै आशंका छैन । रामनगरमा सडक ढलानको काममा कामै नगरी रकम निकासा भएको तथ्य सार्वजनिक भएका कारण यसमा के भएको हो भन्ने विषयमा गाउँपालिकाको नेतृत्व वर्गले नै जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्ने यति वेलाको आवश्यकता हो । विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिने, यसरी समिति गठन गर्दा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ काम दिने र अनियमितता गर्ने गरिएको परिपाटी पुरानै हो । यही कारणले उपभोक्ता समिति गठन नै अपारदर्शी तरिकाबाट गठन गरिएको भन्दै पहिले पनि थुप्रै उजुरी पर्दै आएका छन् । बजेट सिध्याएर आफू मोटाउने धेयका साथ यसरी काम गर्न थालियो भने जनताले विकासको प्रत्याभूति कहिले गर्न पाउलान् ? सोचनीय विषय भएको छ ।
अहिले स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय समस्या समाधान, विकास निर्माण लगायतका सबालमा केन्द्रको मात्र मुख नताकि स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै ती अधिकांश काम पूरा गर्न सकून् भन्ने धेयका साथ नै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै रुपमा हेरिएको हो । देशमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तन पछि पहिलो पल्ट निर्वाचित भएर गएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतका विकृति हटाउँदै उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्ने यति वेलाको बृहत जिम्मेवारी समेत हो । यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा पनि विगतकै कमजोरी प्रस्तुत हुन थाल्ने हो भने त्यसलाई बिडम्बना नै भन्नु पर्ने हुन्छ । जनताले लिएको आशा र भरोषामाथि तुषारापात हुने खालका भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विकृतिलाई निर्मूल पार्दै जनताले चुनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्षम छन् भनेर देखाउने बेला पनि हो यो । त्यसैले राजनीतिक संक्रमणकालका कमजोरी र विकृतिलाई अहिले पनि पालेरै बस्ने हो भने जनताले विकासको प्रत्याभूति कसरी गर्न पाउलान् ? ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
Previous : सप्तरीमा सर्पदंशका घटनामा व्यापक वृद्धि
Next : राजविराजको सहीद गेट निर्माण अलपत्र, सर्वसाधारणलाई सास्ती